U dabaaldega 14guurada Puntland ee Jaalliyada Australia [Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Communities / U dabaaldega 14guurada Puntland ee Jaalliyada Australia [Sawiro]
August 29, 2012 - By: Khalid Yusuf
25kii Bishaan August 2012, magaalada Melbourne waxaa lagu qabtay dabaaldeg ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen tira aad u badan oo ka tirsan jaalliyada Puntland ee Australia. Xafladaas oo lagu qabtay Qaacada ama Halka shirarka ee Coburg City Council waxaa hadala taabanaya taariikhda Puntland iyo isbedeladii ay soo martay 14kii sano oo la soo dhaafay ka jeediyey Guddoomiyaha Jaalliyada Puntland ee Australia (APDF) Omar Mohamud Dhollawaa, iyo Cali Puntland oo ka tirsan odayaasha reer Puntland ee magaalada Melbourne Australia.
Guddoomiyaha iyo Cali Puntland labaduba waxay si kooban uga hadleen hogaamiyayaashii isaga dambeeyey Puntland (Cabdullaahi Yusuf, Mohamed Cabdi Xaashi, Cadde Muusa Xirsi iyo Cabdirahman Faroole) waxyaallaha taariikdu xusi doonta oo ay ka qabteen Puntland iyo sida Puntland door muuqda uga qaadatay Somalia iyo mandiqada guud ahaan. Waxaa isaguna hadala guubaabin ah ka jeediyey Cabdi Elmi (Cabdiyare) oo ku dhiirigeliyey ka soo qaybgalayaasha inay isku duubnaadaan oo ilaaliyaan sharafta Soomaalida, tan Puntland iyo tooda shakhsiyeed.
Waxaa isaguna ka hadlay shirka Saciid Shiinle oo ahaa daadihiyaha barnaamijka, isla markaana ah Sarkaalka cilaaqaadka dadweynaha Australian Puntland Diaspora Forum (APDF) sheegayna in Puntland ay hoy nabadeed u tahay dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka yimaadaan nin walbaana si amaana ugu noolaan karo. Intaan barnaamijku si rasmi ah u bilaaban waxaa dadka lagu maaweelinayay sawira kooban oo muujinaya taariikhda iyo heerka geedi socodka Puntland dhinaca siyaasada, dhaqaalaha iyo bulshada.
Waxaa xusid mudan in barnaamijkaan qabanqaabadiisa ay qayb libaax ka qaateen Puntland Diaspora Youth Association of Australia kuwaas oo waqti badan u huray dhinaca qabanqaabada iyo maaweelada. Dhalinyaradaas waxaa ka mid ahaa Cabdiwahaab Ciise, Deeq iyo Cabdixakiim Xaashi iyo dhalinyara badan oo kale oo aanan magacooda halkan ku soo koobi karin.
Khudbaha ka dib waxaa loo gudbay casho, maaweelo iyo madaalada oo u furnayd dhamaan dadweynaha oo dhan.
President of Australian Puntland Diaspora Forum